Kpọọ ka Action - Ihe karịrị bọtịnụ na ibe weebụ gị | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 1, 2015 Tọzdee, Ọktoba 1, 2015 Dustin Clark
Nụ anụla ebe a na-ekwu okwu ahịa, mkpọsa, na ụkpụrụ ndị ahịa na-abata ebe niile: “Ọdịnaya bụ eze! ”N’oge onye na-azụ ahịa na-azụ ahịa, onye na-ahụ maka ekwentị mkpanaaka, nke na-azụ ahịa ọdịnaya dijitalụ, ọdịnaya bụ ihe niile. Fọrọ nke nta ka ewu ewu dị ka HubspotIhe omuma ahia nke Inbound bu ihe ozo ndi ozo kpatara: oku na-aga ma obu CTA.
Ma na ọsọ gị ime ka ihe dị mfe na bulie ya na weebụsaịtị! elegharala ịdị obosara nke ihe a akpọ-na-eme n'ezie. Ọ bụ karịa naanị bọtịnụ aka - smart ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ - nke na-anọdụ na ozi ịntanetị gị, blọọgụ na ibe ọdịda ma were ndị ọrụ gaa ebe ị họọrọ.
Na mbipụta na nso nso a, Ahịa nke Ahịa maka Nkwalite Ọdịnaya, Element Three (onye were m n'ọrụ) kọwara etu usoro mgbasa ozi jikọrọ - ya bụ, iji mgbasa ozi nwere, akwụ ụgwọ ma kwụọ ụgwọ iji kwalite ọdịnaya dị oke mkpa maka ọganiihu ọdịnaya ahụ. N'ime eBook, anyị kọwara n'ụzọ doro anya ọkọlọtọ CTA na bọtịnụ bụ ihe dị egwu mgbasa ozi nwere maka ịkwalite.
Mana enwere ndị CTA karịa sọsọ na ọkọlọtọ. Gụkwuo ka ị mụta ihe atụ nzuzo atọ ọzọ nke ebe ị nwere ike ịpụta oku na-akpọ oku iji kwalite ọdịnaya gị.
Lezienụ Iji Gwuo
Ọ bụghị ihe ijuanya na mgbasa ozi akwụ ụgwọ bụ ụzọ dị irè iji nweta anya ọhụrụ na ọdịnaya gị - n'otu ule nyocha na ụlọ ọrụ mkpuchi ahụike, E3 hụrụ mmụba nke okporo ụzọ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 800% n'ihi nkwalite akwụ ụgwọ naanị! Mana ka ndị na-ere ahịa na-aga n’ihu ịnabata ọwa akwụ ụgwọ - PPC, ngosipụta, ntugharị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya - otu mmewere nke ana-enyochakarị bụ ozi ahụ.
Ederede mgbasa ozi gị bụ otu akụkụ kachasị mkpa nke mbọ ị na-akwụ - ọ bụrụ na ha na-ede naanị mgbasa ozi ọchụchọ ma ọ bụ gosipụta ozi mgbasa ozi. Gụnyere asụsụ eji eme ihe kpọmkwem - the gụkwuo na pịa ịhụ - na mbipụta mgbasa ozi gị dị mkpa iji kpalite pịa site na. Emechakwa, ị ga-enweta mgbasa ozi pịa tupu ị nweta mgbanwe ntụgharị.
Nke ahụ bụ Meta
Anyị nọ na oge ileghara akara ngosi webụsaịtị na-ejikwa ndị ọrụ, dị ka nkọwa meta, aha peeji na isi okwu. O zughi ezu na Google akọwapụtawo n'ụzọ doro anya otu o si eji akara ndị a wee debe weebụsaịtị anyị, mana akara ngosi ndị a na-eleghara anya na-adịkwa irè iji meziwanye ahụmịhe onye ọrụ gị - yana ntinye aka gị.
[igbe ụdị = ”ihe ịga nke ọma” mmezi = ”” klas = ”” obosara = ”90%”]Nzuzo: Ojiji kwesịrị ekwesị anaghị eme ka mgbaàmà SEO gị dị elu, mana enweghị ha bụ ihe doro anya na-egosi na webụsaịtị gị anaghị echebara ya echiche ma na enyo ya ga - eleghara ya anya. [/ Igbe]
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa na atụmanya ọ bụla nke na-esite n'ọnụ ụzọ gị nwere otu nsogbu a: enwere ike ịchọta data meta ha. Ihe nkedo = efu, ogologo oge, ọdịnaya abụọ ma ọ bụ ihe ezighi ezi. Gịnị kpatara nke a? N'ihi na ọ nwere mmetụta dị oke mkpa na ogo gị, okporo ụzọ, na mgbanwe.
Ama m ihe ị na-ekwu. Bia, dude. Google ekwuola na ha anaghị eji nkọwa meta maka ọkwa ọchụchọ. You' ga-abụ eziokwu. Mana ihe Google na-atụle bụ pịa site na ọnụego site na nyocha ọchụchọ ha na peeji gị - na naanị otu ijikwa ike karịrị nke a bụ aha meta gị na nkọwapụta gị. Ihe ngosi ndị a bụ oku doro anya iji mee ihe maka atụmanya gị, ndị ọbịa nwere ike ịga ahịa na ire ahịa gị ọzọ.
Ma ekwenyeghi? Gbalịa nke a maka nha - n'ihe banyere onye ahịa sọftụwia, Element Three mụbara pịa-site na ọnụego (CTR) site na Google gaa na ibe weebụ ha site na 15% - naanị site na imelite utu aha meta na nkọwa. Nke ahụ abụghị ihe niile - nke a bụ ndepụta nke usoro ọnụọgụ nke isi 5 ka mma karịa naanị ndị a
Pịa mma 7.2%
Ctr - mma 15.4%
Ọnụọgụ ndị ọbịa - mma 10.4%
Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa ọhụụ - mma 8.1%
Bilie Ọnụego - mma 10.9%
[igbe ụdị = ”dee” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”]Ihe mmuta: kwụsị ileghara akara ngosi weebụ na njikwa gị - ọbụna ndị "meta" zoro ezo. Ha gbasara Google. Ha gbasara ndị ọrụ ha. Ha kwesịrị ịdị gị mkpa. [/ Igbe]
Mmemme mmekọrịta nke otu puku afọ
Ihe nzuzo ahụ dị na mmekọrịta mmadụ na ibe - posts na foto nweta ndị ọzọ na-amasị na ndị ọzọ retweets karịa ndị na-enweghị.
Na usoro ntanetị kachasị ọhụrụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ foto niile, site na Instagram ruo Tinder.
Ma oge ole ka ị na-eji mgbe ịchọrọ foto zuru oke iji mepụta ozi dịka, nke ọma, aghụghọ? Mepụta ihe ngwa ngwa na ime ihe na mgbasa ozi mgbasa ozi gị dị mkpa, na CTA nke ọma kwesịrị ịbụ mmalite, ọ bụghị njedebe.
Tụlee ihe ịchọrọ ka ndị ọrụ mee, otu ịchọrọ ka ha mee, na mgbe. Gbaa mbọ hụ na ndị a dabara n'ụzọ ọ bụla - n'agbanyeghị ọnụọgụ agwa nke post gị.
N'ezie, ị nwekwara ike ịmepụta ihe na onyonyo na vidiyo gị. Foto nke ngwaahịa ọhụrụ, ndị mmadụ na-emepe ngwugwu, ihe ọhụụ ọhụrụ na-egbu maramara - ndepụta ahụ na-aga n'ihu na maka visuals dị irè.
Vidiyo na-enye ohere ọzọ iji ree onwe gị na atụmanya gị. Tinye ikpo oku iji mee ihe na signoffs gị na ihu ọma. Mee ka ndị ọrụ mara na ị na-eche, ị nọ ebe ahụ ma dịkwa njikere ịzaghachi.
Mee ka ọ dị elu ma sie ike
N'ikpeazụ, cheta na ị nọ n'ime ekwentị mkpanaaka. Dị Mfe apụtaghị obere ọdịnaya - mana ọ pụtara obere mkpọtụ n'etiti ndị ọrụ gị yana ebumnuche kachasị. Jiri oku gị rụọ ọrụ n’oge na oge. Ọtụtụ mgbe, anyị na-eli bọtịnụ anyị, okwu omume na nnukwu ịkwụ ụgwọ na ala nke ibe ahụ.
Kama, gbaa mbọ hụ na quid pro quo bụ ihu na etiti - ma ọ bụ opekata mpe karịa atụrụ ahụ. Debe ozi gị ruo n'ókè. Jiri ngwaa dị ka ịmụ ihe, gụọ, ma kpọọ, ma banye na anụ nke onyinye gị n'oge na-adịghị anya. Nwere ike ma kwesiri iji ntuziaka ndị a na ihe atụ CTA niile dị n'elu - ọkọlọtọ, bọtịnụ, nyocha akwụ ụgwọ (gbanye elu na obere ihe - ọ bụrụ na ị naghị emeri, ọ bụghị ọnụ ahịa ịnye…), ngosipụta na mgbasa ozi ọha na eze akwụ ụgwọ, vidiyo , izi ozi mmekọrịta, na ozi meta gị.
Wepụ onye na - ede akwụkwọ gị ka ọ drinkụọ mmanya, nye ya nkwalite ahụ tosiri ike, wee banye ọrụ - jiri okwu gị nke ọma. Oku gi ime ihe na ndi ahia gi gha ahu gi n’anya.
Tags: kpọọ ka emeihe gbara gburugburu ka emee
Ọkt 2, 2015 na 5:05 AM
Daalụ @marketingtechblog na @dustinclark ndụmọdụ bara ezigbo uru. Na-ekwenye karịsịa na ebe nrụọrụ weebụ gị data kwuru. Dị ka ị maara data meta gị (dịka mkpokọta weebụsaịtị descriptor) bụ akara mgbasa ozi ika gị na ntanetị elere anya na ntanetị ọchụchọ. Dika odi otua, ekwesiri ka odi ya nma ma buru ya dika okwu onye isi ala. 🙂 Dị ka ị na-ekwu, ọtụtụ ụlọ ọrụ isnt otú ọ pụrụ ịbụ ihe ngwa ngwa mmeri. Na Altaire anyị na ndị ahịa email na-arụ ọrụ na mkpọsa email email ha ugbu a na-enyere nkwado na nnwale maka mmemme niile. Mana ọ bụrụ na webụsaịtị ahụ adịchaghị njikere enwere ike ịla n'iyi. Ọrịa gafere na ndụmọdụ gị.